नर्जाखानीवासीको पीडा : गाडी चढ्न... :: सुजिता कार्की :: Setopati
नर्जाखानीवासीको पीडा : गाडी चढ्न तीन घण्टा पैदल !
बागलुङ, चैत १२
सदरमुकामदेखि ३६ कोष पश्चिम तमानखोला गाउँपालिकाको सिङ्गो ६ नम्बर वडा सडक सुविधाबाट बञ्चित छ।
नर्जाखानी, भित्रीवन र पात्ले गाउँका बासिन्दा सडक नहुँदा सास्ती व्यहोर्न बाध्य छन्। गाडी चल्ने ठाउँ भेटाउन तीन घण्टासम्म पैदल हिँड्नुपर्छ। डोकोमा बोकेर अस्पताल लैजाँदा बाटैमा बिरामीको मृत्यु भएका घटना गाउँलेसामु ताजै छन्। जिल्लाभर सडक सञ्जाल फैलिँदा नर्जाखानीमा किन सडक बनेन ?
वडाध्यक्ष कुलबहादुर छन्त्याल भन्छन्, ‘एक त विकट भूगोल, त्यहीमाथि राज्यको पनि ध्यान पुगेन।’
उनका अनुसार अझै पनि गाउँमा सडक बन्ने कुनै छाँटकाँट छैन। स्थानीय सरकार तमानखोला गाउँपालिकाले पनि नर्जाखानीमा सडक जोड्ने योजना बनाएको छैन। ‘वडाको मात्र बजेटले सडक आउँदैन, माथिबाटै सम्बोधन हुनुपर्छ,’ वडाध्यक्ष छन्त्यालले भने।
विकासको मेरुदण्ड मानिने सडक नै नपुगेपछि पाएका अन्य सुविधा गाउँलेलाई सामान्य झैँ लाग्छन्। ‘मूल कुरा सडक नै छैन, हामीलाई ठूलो दुःख छ,’ स्थानीय निर्मलादेवी सिरपालीले भनिन्। जतिसक्दो छिटो गाउँलाई सडकमा जोड्न सके ठूलो राहत मिल्ने उनको भनाइ छ। सरकारी कामकाजका लागि गाउँपालिकाको केन्द्र बोङ्गादोभान बजार पुग्न पनि घण्टौँ हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ।
विद्यार्थीको बेथा त झन् कहालीलाग्दो छ। तीन घण्टासम्म पैदल हिँडेर विद्यालय जानुपर्ने अवस्था छ। खच्चड र भरियामार्फत ढुवानी गर्दा दैनिक उपभोग्य सामानमा पनि महँगी खेप्न गाउँले बाध्य छन्। लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट बिजुली र पछिल्लो समय मोबाइल सेवा पाएका गाउँले सडकको व्यग्र प्रतीक्षामा छन्। नर्जाखानी विकासमा पछि परेको स्थानीय विष्णु आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक ओमप्रसाद छन्त्यालले बताए।
‘स्थानीय सरकार आएको छ, अब विकास आउँला भन्ने अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘यहाँको जरुरी आवश्यकता भनेको सडक नै हो।’ गाउँपालिकाले सडकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे पनि चालू आवमा नर्जाखानीमा कुनै सडक योजना छैन। विकट भूगोल र छरिएर रहेका बस्तीका कारण सडकलाई ठूलो बजेट चाहिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढाले बताए।
‘आगामी वर्षको योजनामा नर्जाखानी समेट्छौँ,’ उनले भने – ‘मार्ग खोल्नमात्र करोडौँ रुपैयाँ लाग्ने अवस्था छ।’ अहिले सडक पुगेको वडा नम्बर ५ खुङ्खानीबाट नर्जाखानीको भित्रीवन र पात्ले तीन घण्टाको पैदल दूरीमा छन्। सडकसँग जोडिए त्यहाँको स्थानीय उत्पादनले बजार पाउने देखिन्छ। कृषि र पशुपालनको प्रचुर सम्भावना रहेको त्यस क्षेत्रको अर्को समस्या गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारी पनि हो।
दलित र जनजातिको मात्र बसोबास रहेको तमानखोला गाउँपालिका जिल्लामै सबैभन्दा विकट मानिन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत सुविधाबाट त्यहाँका बासिन्दा वञ्चित छन्। गाउँपालिकाले विकास गुरुयोजनामार्फत त्यहाँका समस्या समाधानका लागि पहल अघि बढाएको छ। स्थानीय स्रोतसाधनको पहिचान र उपभोगबाट गाउँपालिकालाई स्वाधीन बनाउने लक्ष्य लिइएको छ।रासस
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत १२, २०७४, ०७:०३:५६